Abavelisi kunye nabaBoneleli beKhowudi eZinzileyo eFaktri yeBarcode eZinzileyo
I-MJ3850 yimodyuli edibeneyo ye-2d yokuskena kunye nomzimba omncinci, ukudibanisa okuphezulu, ukuguquguquka kunye nokulula, kunye nokusebenza okugqwesileyo.
I-MJ3850 inokuhlanganiswa kwizixhobo zokusebenza ezifana neebhasi, oomatshini bokuthengisa amatikiti, oomatshini boku-odola abazenzelayo, kunye namasango okulawula ukufikelela.Isetyenziswa ngokubanzi kuthutho oluhlakaniphileyo, ukuthengisa okuzithengisayo, unyango oluhlakaniphile, izakhiwo ezihlakaniphile kunye nezinye iindawo.
I-MJ3850 ithatha i-algorithm yokuqondwa komfanekiso ophezulu kunye ne-wide-angle-angle optical lens, enokufunda ngokulula zonke iintlobo ze-barcode ze-1d kunye ne-2d barcodes ngesantya esiphezulu, kwaye inokumelana nezicelo ezahlukeneyo zokuskena ngokulula.
I-CE kunye ne-RoHS eQinisekisiweyo esiFundiweyo-eMount Reader ye-2D Barcode Scanner MJ3850
UmGangatho oPhezulu we-2d oFakelwe iskena seBhakhowudi eFakelweyo, isiFundo seBhakhowudi eFakelweyo eZinzisiweyo, MINJCODE MJ3850
I-Smart Auto Scanner Iskena seBhakhowudi yoLawulo lomnyango RFID RS485 IsiFundi seKhadi esixhonywe eludongeni iMJ8602
I-Smart Auto Scanner Iskena seBhakhowudi yoLawulo loNcango lwe-RFID RS485 IsiFundo seKhadi, Ujongano: RS232, RS485, Wiegand.
Iskena esitsha soMfundi weKhowudi yeKhowudi yeQr yesiSithinteli seSango lesiLawuli seSixokelelwano soMbane weKhowudi yeKhowudi yeQr isiFundo seKhadi leMJ 8601
Iskena esitsha seKhowudi yeKhowudi yeQr yokuFunda yeNkqubo yokuLawula iSango leKhowudi yeQr iKhowudi yeKhowudi yeKhowudi yeQr,Ujongano:USB,RS232,RS485,Wiegand.
MINJCODE 2D Iskena seBhakhowudi yeModyuli yeMJ E1203
Imodyuli eZinziselweyo ye-1D ye-2D yeSikena seBhakhowudi yeModyuli ye-CMOS yeBhakhowudi yeSikena seModyuli ene-RS232/Ujongano lwe-USB
© Copyright - 2010-2021 : Onke Amalungelo Agciniwe. iveliso ezifakiwe, Imephu yesiza, Iskena seBhakhowudi yeQr, Iskena seBhakhowudi esibambe ngesandla, Qr Code Reader Barcode Scanner, Iskena seBhakhowudi, Iskena seBhakhowudi yaseTshayina, Iskena seBhakhowudi esitshiphu, Zonke iimveliso